Inona no dikan'ny fiombonana ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Inona no dikan'ny fiombonana
Inona no dikan'ny fiombonana. Rehefa mieritreritra ny kômonio ny olona, ​​dia alaivo sary an-tsaina ny andiana ankizy ao anatin’ny fiangonana iray miomana handray fanamasinana amin’ny alalan’ny mofo. Zava-dehibe anefa izany fantaro ny antony nanaovana izao hetsika izao ao anatin’ny fiangonantsika.
Ny fiombonana dia fihetsika izay maneho ny fotoana nizarany ny mofon’ny Fanasana Farany i Jesoa. Ilay nozarainy tamin’ny mpianany talohan’ny nanomboana azy tamin’ny hazo fijaliana. Izy io dia a fotoana hahatsiarovana indray fa maty ho anao Izy. Fotoana hieritreretana sy hisaorana ny sorona nataony ary handinihana ny zava-drehetra.
Rehefa fantatsika ny tena dikan’izany, dia tena ilaina ny mahafantatra hoe ao amin’ny andalan-teny ao amin’ny Baiboly no resahina sy izay asehony.
1 Andininy sasany momba ny Fanasan’ny Tompo
2 Inona avy ireo tandindon’ny Fanasan’ny Tompo?
3 Iza no afaka misakafo?
Andininy sasany momba ny Fanasan’ny Tompo
Ary nandray ny mofo Izy, ka nisaotra, dia novakiny ka natolony ny mpianatra, ary hoy izy: Ity no tenako omena ho anareo; ataovy izao ho fahatsiarovana Ahy. Toy izany koa, rehefa avy nisakafo izy, dia nandray ny kapoaka ka nanao hoe: “Ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin’ny rako, izay alatsaka ho anareo”. ( Lioka 22:19-20 ).
“Fa isaky ny mihinana ity mofo ity sy misotro amin’ity kapoaka ity ianareo, dia manambara izany FAHAFATESANA ny Tompo mandra-pihaviny" ( 1 Korintiana 11:26 ).
“Inty aho, eo am-baravarana aho ka mandondòna. Raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra hiara-misakafo aminy Aho, ary izy amiko" ( Apokalypsy 3:20 ).
Hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina tokoa: Raha tsy mihinana ny nofon’ny Zanak’olona sy misotro ny rany ianareo, dia tsy hanana fiainana ao anatinareo. Izay rehetra mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary Izaho hanangana azy amin’ny andro farany. Satria ny nofoko no tena sakafo ary ny rako no tena fisotro. Izay rehetra mihinana ny nofoko sy misotro ny rako dia mitoetra ao amiko ary Izaho ao aminy. Fa tahaka ny nanirahan’ny Ray velona Ahy, ary Izaho koa velona amin’ny fitiavan’ny Ray, dia tahaka izany koa izay mihinana Ahy no ho velona amiko” ( Jaona 6:53-57 ).
«Izaho no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Ity mofo ity no haniko, izay homeko ho fiainan’izao tontolo izao” ( Jaona 6:51 ).
“Hisy olona avy any atsinanana sy andrefana, avy any avaratra sy atsimo, ka hipetraka hisakafo ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra. Marina tokoa fa misy ny farany ho voalohany, ary ny voalohany ho farany" ( Lioka 13:29-30 ).
“Koa na zovy na zovy no mihinana ny mofo na misotro amin’ny kapoaky ny Tompo amin’ny tsy mendrika dia hanota amin’ny tena sy ny ran’ny Tompo. Diniho ny tsirairay avy, dia hano ny mofo sy hisotro amin’ny kapoaka. Fa izay mihinana sy misotro nefa tsy mahalala ny tenan'ny Tompo dia mihinana sy misotro ho fanamelohana ny tenany. Izany no mahatonga ny maro aminareo ho osa sy marary, ary maro no efa nodi-mandry. ( 1 Korintiana 11:27-30 ).
“Raha miangona ianareo, dia tsy azo atao ny mihinana ny Fanasan’ny Tompo, satria samy mihinana ny sakafony avy ianareo ka tsy miandry ny namany. Koa raha noana ny iray, ny iray kosa mamo. Tsy manana trano hohanina sy hosotroina va ianareo? Sa manao tsinontsinona ny fiangonan'Andriamanitra sy manala baraka izay tsy manana na inona na inona? Inona no holazaiko, hidera azy va aho? Azo antoka fa tsy " ( 1 Korintiana 11:20-22 ).
“Tsy mahazo misotro amin’ny kapoaky ny Tompo na amin’ny kapoaky ny demonia ianareo; tsy mahazo mihinana amin’ny latabatry ny Tompo sy ny latabatry ny demonia izy ireo” ( 1 Korintiana 10:21 ).
“Koa, ry rahalahy, raha miangona hihinana ianareo, dia mifampiandrasa. Raha misy noana, dia mihinàna ao an-trano, mba tsy ho voaheloka rehefa mivory. Ho an'ny ambiny, rehefa miala aho, dia homeko anao ny toromarika " ( 1 Korintiana 11:33-34 ).
Inona avy ireo tandindon’ny Fanasan’ny Tompo?
Ny tandindon'ny Fanasan'ny Tompo dia mofo sy divay. Noraisin’i Jesosy ny zavatra tsotra sy mora hita mba tsy hahatonga ny Fanasan’ny Tompo ho fombafomba sarotra. Ny mofo sy ny divay aza tsy tonga nofo sy ran’i Jesosy, tandindona fotsiny ireny. Ny zava-dehibe dia tsy ny sakafo ihany, fa ny misolo tena.
Mofo: Jesosy nilaza fa ny mofo maneho ny vatany izay notapatapahina ho antsika. Teo amin’ny hazofijaliana no niaretany fahoriana be, noho ny fitiavana antsika. Niaritra ny fanaintainana mendrika antsika Izy, teo amin’ny toerana misy antsika.
«Ary nandray mofo Izy, ary rehefa nisaotra, dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe: Ity no tenako izay omena ho anareo; Ataovy izao ho fahatsiarovana Ahy. Dia toy izany koa, rehefa nisakafo, dia nandray ny kapoaka Izy ka nanao hoe: Ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin’ny rako, izay alatsaka ho anareo.. Lioka 22:19-20
Divay: maneho ny fanekena vaovao eo aminao sy Andriamanitra. Ao amin’ny Testamenta Taloha, dia nofehezina tamin’ny sorona ny fanekempihavanana, izay nandatsahana ny ran’ilay biby. Ny ran’i Jesosy, izay rehetra niraraka rehefa maty, sady nanonitra ny fahotantsika sy nanorina a Fifanarahana vaovao eo anelanelantsika sy Andriamanitra.
Ary toy izany koa, rehefa nihinana, dia nandray ny kapoaka Izy ka nanao hoe: Ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako, izay alatsaka ho anareo.. Lioka 22:20
Rehefa mihinana ny mofo sy misotro ny divay ianao, dia asehonao amin’izao tontolo izao izany Kristy maty ho anao. Ny soron’i Jesosy dia nandoa ny vidin’ny fahotanao ary ankehitriny Izy dia mitoetra ao anatinao. Ara-panoharana izany toy ny hoe maty teo amin’ny hazo fijaliana ianao ary niara-nitsangana tamin’i Jesosy.
«Koa amin'izany, isaky ny mihinana ity mofo ity sy misotro amin'ity kapoaka ity ianareo, dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-pihaviny.".
1 Korintiana 11:26
Amin'ny lafiny iray, Tsy nanome toromarika voafaritra tsara i Jesosy momba ny karazana mofo na divay hampiasaina, na ny haben’ny anjara, na ny fomba tsara indrindra hizarana sy hihinanana ny sakafo, na ny fahamaroan’ny fihinanana azy. Secondary izany rehetra izany ary miankina amin'ny fiangonana tsirairay ny fomba hanaovana izany. Ny be indrindra Ny zava-dehibe dia ny asehon'ny Fanasana fa tsy ny fomba fandraisana azy.
Iza no afaka misakafo?
Raha nanaiky an’i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy ianao dia afaka manatrika ny Fanasana. Tena ilaina ny mahatakatra izay nataon'i Jesosy ho anao, ny Fanasana dia natao ho an'izay voavonjy. Tsy misy dikany ny misotro raha tsy mino na tsy manaiky an’i Jesosy, satria ny Fanasana dia mampiseho fa efa nanaiky an’i Jesosy ianao. Ny fandraisana kômonio tsy amin’ny finoana dia tsy fanajana an’i Jesosy, Ambonin’izany, dia milaza ny Baiboly fa diso izany.
avy amin'ny Discover.online Manantena izahay fa nahasoa anao ity lahatsoratra ity. Raha tianao ho fantatra izao nanao ahoana ny fiangonana voalohanyNy fomba nandaminana azy sy ny famolavolana azy, tohizo ny fitetezana ny tranokalanay.
Nanao ahoana ny Fiangonana voalohany?